नार्कमा सरुवा आतंक « Pahilo News
नार्कमा सरुवा आतंक
प्रकाशित मिति : 1 December, 2016 11:22 am
१६ मंसिर । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कका कर्मचारीहरूमा सरुवा–आतंक फैलिएको छ । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका कृषि मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले आस्था र पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा गर्न अनावश्यक दबाब दिन थालेपछि आतंक फैलिएको हो ।
नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. यमराज पाण्डेलाई विभिन्न दबाब दिने र पाण्डेले नियमले नमिल्ने काम गर्न अस्वीकार गरेका कारण जगेडामा राख्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । मन्त्रीले भनेबमोजिम विभिन्न नाजायज काम गर्न नमानेपछि उनलाई मन्त्रालयमा तान्ने र आफूनिकटको कर्मचारीलाई निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको मन्त्रालय सूत्रले बतायो ।
यसअघि हरि पराजुली कृषिमन्त्री भएको बेला नियुक्ति भएकै आधारमा पाण्डेलाई एमालेनिकटको आरोप लगाउँदै मन्त्रालय तान्ने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । त्यसो त मन्त्री चौधरीले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै कार्यकारी निर्देशक पाण्डेलाई दबाब दिएर विभिन्न कर्मचारीलाई मालदार विभागको जिम्मेवारी दिन बाध्य पारिएको थियो ।
अहिले नार्कमा योजना तथा समन्वय विभागको निर्देशक डा. दीपक भण्डारी, बाली अनुसन्धान विभागको निर्देशक शम्भुप्रसाद खतिवडा, पशु तथा मत्य अनुसन्धान विभागको निर्देशक चेतराज उप्रेती र अर्थ विभागको निर्देशकमा रामबहादुर केसी छन् भने प्रशासन विभागमा नवीनप्रकाश पौडेल छन् । त्यसमध्ये पौडेललाई पूर्वाग्रहवश कृषि अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारमा सरुवा गरिएकोमा उनी अदालतको आदेश ल्याएर पुरानै स्थानमा बहाल भएका छन् ।
यसरी नार्कको संरचनामा जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्नुको कारण भने केही दिनअघि गरिएको कर्मचारी पदपूर्तिको सूचना नै रहेको बताइन्छ । नार्कले विभिन्न स्थायी पदहरूमा सयौं कर्मचारी माग गरेकामा अहिले परीक्षाको तयारी सुरु हुन थालेको बताइन्छ ।